अरनिको, बेइजिङ र आफन्त - China Radio International
अरनिको, बेइजिङ र आफन्त
(GMT+08:00) 2019-08-29 16:01:42
प्रांगणभित्र रहेको एउटा हलमा छिर्नेबित्तिकै फोटो खिच्न सकसक लागिरहेको थियो। नलागोस् पनि किन ? अचेल पर्यटन भनेकै फोटोग्राफी जो भएको छ।
जहाँ पुगे पनि पहिला फोटो खिच्ने अनि त्यही फोटो 'जुम' गरेर नियाल्ने। तत्पश्चात् यस्तो पनि रहेछ भनेर अचम्मित हुने। हलको ढोकानेर कुर्सीमा टुसुक्क बसिरहेको गार्डको ध्यानाकर्षण होओस् भनेर साथीहरूले सुन्ने गरी नेपालीमै भनें, 'यहाँ फोटो खिच्न पाइने हो कि होइन ? तिमीहरू हतपत फोटो खिच्ने काम नगर्नू है, अँ फोटो क्या फोटो।'
चिनियाँमा 'चाउफियान' भनेको भए कुर्सीमा बसिरहेको मानिसको मुस्कानले 'जुँगा हल्यो, कुरा बुझ्यो' भनेजस्तै हुन्थ्यो होला। फोटो भनेको कसरी बुझोस् ? तथापि विदेशीहरू आइरहने स्थलमा काम गर्ने चिनियाँले 'फोटो' त कसो नबुझ्ला र ? उसको मुस्कानको लाभ उठाउँदै मैले सोचिदिएँ मोटेले कुरा बुझेछ ! तर के हुन्थ्यो ? हाम्रै पछिपछि उसकै सहकर्मी गेटभित्र छिरिरहेकी रहिछन्। ऊ कुर्सी जिम्मा लगाएर फुरुक्क परेर बाहिरियो।
चीनका कतिपय संग्रहालयमा फोटो खिच्न निषेध छ। नेपालको पशुपतिनाथमा छिर्ने मान्छेहरूले धमाधम फोटो खिचेर मन्दिरको गरिमा नै घटाएको देख्दा त कहिलेकाहीं यस्तो काममा कडैसँग बन्देज लगाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर यहाँनेर स्व.राजा वीरेन्द्र र ऐश्वर्य, पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलगायत कैय गन्यमान्य व्यक्तिहरूका फोटो रहेछन्, जसले बेइजिङको केन्द्र, फुछङमनमा रहेको अरनिकोको आँगन टेकेका रहेछन्। सूचनाप्रति आज्ञाकारी भएर फोटो खिचिएन तर फोटो हेरियो र फेरि एक पटक गर्वले छाती ढक्क फुलाइयो।
हलका भित्ताहरू चहारिसकेपछि फर्किने बेलामा ढोकानेर उही मोटे गार्ड उसैगरी कुर्सीमा ढसमस्स बसिरहेको रहेछ। उसबाट पार हुने बेलामा फैलिएको गन्धबाट थाहा भयो, चुरोट खाने मौका पाइयो भनेर पो अघि उसको मुख उज्यालिएको रहेछ। अजंगको गार्ड ओझेल पर्दा पनि फोटो खिच्ने हिम्मत त आएको थिएन। बेइजिङको कम्युनिकेसन युनिभर्सिटीमा पीएचडी गर्दै गरेकी कीर्ति भुजूले भर्खर चीन आएपछिको एउटा अनुभव त्यति नै खेर संक्षेपमा सुनाइसकेकी थिइन्, 'चाइनामा त जतासुकै सीसी क्यामराले निगरानी गरिरहेको हुँदोरहेछ। निषेध गरेको ठाउँमा फोटो खिच्यो भने त डिलिट नै गर्न लगाउने रैछ।'
'वो मन् श् निपोअर रन्' भर्खरै चिनियाँ सिक्न थालेकी बारा, निजगढकी रोशिना अधिकारीले काउन्टरमा बसेकी महिलासमक्ष भनिन्, 'हामीहरू नेपाली हौं।' ६० उमेरकी जस्ती देखिने महिलाले मुसुक्क मुस्काएर भित्र छिर्ने अनुमति दिइन्। पासपोर्ट पनि हेर्न खोजिनन्। अनुहारबाटै खुट्याइन् कि ? उसै त नेपाली कलाकारको देशबाट आएको भन्दै गेटबाट निःशुल्क छिरेका हामी। त्यसमाथि हामीले नै अनुशासन उल्लंघन गर्नु सान्दर्भिक पनि हुन्थेन। तैपनि भित्र छिरेलगत्तै हाम्रो चुलबुल सुरु भैसकेको थियो। अरनिकोसँग यो मेरो तेस्रो साक्षात्कार थियो। पहिलो पटक सन् २०१२ को अन्त्यतिर त्यहाँ जाँदाखेरि देखिएका अरनिको अझै पनि उसैगरी उभिएका रहेछन्। उनको मूर्तिमुन्तिर नेपाली, चिनियाँ र अंग्रेजीमा लेखिएको वृत्तान्त मात्रै उसैगरी राखिएको देखिन्थेन।
अचेल सूचना प्रविधिको जमानामा अरनिको १३ औं शताब्दीकै इतिहास बोकेर उभिइरहेका थिए। प्राचीन वास्तुकलाको युगलाई हामीले इन्टरनेट युग मार्फत जिस्क्याउन खोजिरहेका थियौं। उनले पनि देखे होलान्, हामीले फेसबुक लाइभ गरेर अरू धेरै साथीभाइमाझ आफ्नो चुरीफुरी देखाएको। तर सन् २००९ देखि फेसबुक नचल्ने देशमा 'भीपीएन' कनेक्सन गर्न पनि सकस। बल्लतल्ल जोडियो। चिनियाँमा पाइ–था–स् र नेपालीमा श्वेतचैत्यको विशाल टावर मुन्तिर बसेर मन्दिरको स्वरूप देखाउनु सम्भव थिएन। तथापि झन्डै ८ सय वर्षदेखि नेपाल–चीन सम्बन्धमा यो मन्दिर बेइजिङमै उभिएर एउटा ठोस प्रमाणका रूपमा स्थापित थियो। जति नेपालीले अरनिकोको नाम लिएर गर्व गछौं, त्यति नै चिनियाँहरूले पनि सोचिदिने हो भने हाम्रो भावनात्मक सान कति बढ्ने थियो होला।
एक जना फुर्तिला वृद्ध ओहोरदोहोर गर्दै गरेको देखिए। उनी अरनिकोलाई पृष्ठभूमिमा पारेर आफ्नो तस्बिर खिच्न चाहन्थे। बेला बेलामा उच्चारण गरिरहेका थिए, 'आ–नि–कले बनाएको हो यो।' उनले अरनिको (चिनियाँमा आ–नि–क) बारे चिनाइरहनुपर्ने विषय नै थिएन। तर उनको नियत हामीसँग भलाकुसारी गर्ने थियो सायद। उनले थप बताए, 'सान्सी प्रान्त थाहा छ ? त्यहाँ 'पै–लिन श' भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ एउटा ढुंगो छ जुन नेपालबाट ल्याएको हो।' चीनमा दुइटा सान्सी प्रान्त छन्। नेपालीले राखिदिएको नाम हुनुपर्छ, वल्लो सान्सी र पल्लो सान्सी। उनले 'टोन' मिलाएर सान्सी भनेका भरमा हामीजस्ता मान्डारिनका अल्पज्ञानीले सहजै छुट्याउन सक्ने सान्सी थिएन। तर उनले तुरुन्तै 'पै लिन श' भनेका हुनाले ठम्याउन धौ भएन। त्यो ठाउँमा पुगेको थिएँ म, सिआन सहरमा पर्छ अर्थात् पल्लो सान्सी। वल्लो सान्सी र पल्लो सान्सी छुट्याउने नेपालीहरूको आफ्नै तरिका छ, जुन सान्सी बेइजिङबाट नजिक छ, त्यो वल्लो सान्सी भयो। त्यहाँबाट उतापट्टि रहेको सान्सीचाहिँ पल्लो सान्सी। मलाई ती वृद्धले भनेको ठाउँ पल्लो सान्सी प्रान्त हो भन्ने त्यतिखेर लाग्यो जतिखेर उनले सिआन सहरको नाम पनि उच्चारण गरे र 'पै लिन श'को कुरा पनि निकाले।
नेपाल–चीन दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको ६० औं वार्षिकोत्सव मनाउनका लागि एउटा वृत्तचित्र बनाउने योजनाअनुरूप म २०१५ मा त्यहाँ पुगेको थिएँ। त्यसको उद्देश्य थियो, नेपाल र चीनका भगिनी सम्बन्ध स्थापित सहरको विषयमा टेलिभिजन सामग्री तयार गर्नु। सिआन र काठमाडौं सहरबीच सन् १९९६ मा भगिनी सम्बन्ध स्थापित छ। तिनै प्रस्तर कलामा उभिएर चिनियाँ सहकर्मीले चिनियाँमा र मैले नेपालीमा भनेका थियौं, 'जसरी सिआन सहर पत्थरकलाले प्रख्यात छ, नेपालको काठमाडौं सहर पनि काष्ठकलाले प्रसिद्ध छ नि।'
ती बूढा चिनियाँले एक छिन मलाई केही वर्षपछाडि हुत्याएर त्यहाँबाट उम्किने चाँजो मिलाए। उनी प्राचीन सहरमा जन्मिए पनि बेइजिङमा हुर्किएका रहेछन्। अहिलेसम्म उनी को हुन्, नाम पहिचान के हो केही थाहा छैन। उनी ओझेल पर्नै लाग्दा अलिकति रोकिएर भने, 'मेरो बहिनी केही महिनाअघि मात्रै नेपाल गएर फर्किएकी, तर म गएको छैन नेपाल।'
त्यसपछि उनी अरनिकोको मूर्तिदेखि छेउमा रहेको ६, ७ खुट्किलाको भर्‍याङ उक्लिएर अर्को परिसरभित्र छिरे। अब मूर्तिलाई छेको पारेर फोटो खिच्ने हाम्रो पालो। यस पटक मैले फरक ढंगले फोटो खिचें। अरनिकोको सालिकलाई हातमा समातेझैं वा काँधमा चढाएझैं गरेर सेल्फी लिएँ। कीर्तिले गतिलोसँग फोटो नखिचिदिएपछि मेरो पनि पारो चढ्यो। पृष्ठभूमिमा अरू अरू मान्छेहरू पनि फोटोमा कैद भए। उनले भनिन्, 'हत्तेरिका, यी मान्छेहरू पनि कत्ति आएका ?'
चीनका पर्यटकीय स्थलहरू अक्सर भीडभाडयुक्त हुन्छन्। यहाँ सुनसान थियो। मानिसहरू कमै थिए। मैले भनें, 'बिचरा यहाँ के मान्छे आउनु र ? दैनिक २ सय मानिस आए भने पनि जम्मा ४ हजार आरएमबी आम्दानी हुँदो हो।' उनलाई अहिलेसम्म यस पर्यटकीय सम्पदामा सबै मान्छे निःशुल्क छिरेको जस्तो लागेको रहेछ। मैले उहिल्यै पासपोर्ट बोक्न गरेको अनुरोधको कुनै गम्भीर अर्थ रहेको ठानेकी रहिनछन्। चिनियाँहरू जतिखेर पनि नागरिकता बोकिरहेका हुन्छन्। जहाँ जे काममा पनि एउटा कार्डजस्तो नागरिकता नै सम्पूर्ण विवरण समेटिएको दस्ताबेज हो उनीहरूको। स्क्यान गरेपछि उनीहरूको इतिवृत्तान्त समेटिएको हुन्छ। विदेशीहरू पनि कतै निस्किँदा साथमा पासपोर्ट हुनु जरुरी नै थियो। विश्वविद्यालयको छात्रावासबाट जता निस्किँदा पनि उनको झोलामा पासपोर्ट साविकझैं हुने गर्दोरहेछ। मैले गरेको हिसाबकिताबपछि उनी पनि गौरवान्वित भइन्, नेपाली भएकै कारण निःशुल्क प्रवेश गर्न पाइन्छ भन्ने थाहा पाएर पुलकित भइन्।
करिब ८ सय वर्षको वरिपरि पुग्दा अरनिकोको चिनोको रूपमा एउटा सम्पदा यस्तो ठाउँमा उभिइरहेको छ जहाँ बेइजिङका सीमित हुथोङ अर्थात् परम्परागत गल्लीचोक र घरआवास भएको प्राचीनताको झल्को दिनका लागि संरक्षित क्षेत्र छ। सडकवारिको केही भूभागमा एउटा प्राचीनता झल्किएको छ भने पारिपट्टि भव्य फाइनान्सियल बिल्डिङहरू ठडिएका छन्। त्यहीं छ एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकको कार्यालय पनि। त्यही कार्यरत नेपाली कर्मचारी किशोर उप्रेतीले भने, 'इतिहासको अनेकन कालखण्ड पार हुँदा पनि चीनले यस्तरी संरक्षण गरेर राखिदिएको श्वेतचैत्यजस्तो सम्पदा अर्को कुनै छ र?'
यस वर्षको जुन महिनामा आफ्नो ८ वर्षीय छोरा र चिनियाँ पतिका साथ अरूणा राई बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा पासपोर्टसम्बन्धी कामका लागि आइन्। उनले चिनियाँ श्रीमान्लाई नेपाली सानशौकत देखाउन भनेर अरनिकोको प्रांगणसम्म पुर्‍याइन् तर त्यो त बन्द भैसकेको रहेछ। बाटैबाट उनीहरूले श्वेचतैत्यको शिरलाई पृष्ठभूमिमा पारेर फोटो खिचेर चित्त बुझाए। राई चिनियाँ पतिसँग यतिका वर्षपछि पनि वैवाहिक प्रमाणपत्रको चक्करमा थिइन् तर मनमस्तिष्कमा अरनिको पनि थिए, जसलाई उनी आफ्ना पतिसँग परिचय गराउन खोज्दै थिइन्। सायद ९ महिनाको जीर्णोद्धारपछि पुनर्जन्म लिएर अरनिकोको घर बेइजिङमा झनै चम्किनका लागि गुप्तवास बसेको हो कि?
हुन पनि करोडौं चिनियाँका भीडमा बेइजिङमा कुनै चम्किलो नेपाली भेटिन्छ भने त्यो अरनिको नै हो। बेइजिङ टेक्ने जो कोही नेपालीलाई सदैव मधुर मुस्कानले आतिथ्य दिने अरनिको युगौंदेखि अनवरत छन्। आजसम्म उनको आँगनीमा टेक्ने कैयन् गन्यमान्य भौतिक रूपमा बिलाइसके तर भावनात्मक रूपमा नेपालीका सदावहार आफन्त, नेपाली बन्धुका रूपमा अरनिको प्रतीत भैरहन्छन्। अत्याधुनिकता र प्राचीनबीचको 'फ्युजन' भएको बेइजिङ फुछङमन् क्षेत्रका साक्षी अरनिको नेपाल–चीन सांस्कृतिक दूतका रूपमा हरेकका मनमस्तिष्कमा साँचिएका छन्।